पूर्व बजेट छलफल : ‘अस्थिर कर्मचारीतन्त्र विकासको बाधक’ | eAdarsha.com
पोखरा । आर्थिक वर्ष लाग्ने वित्तिकै खर्च व्यवस्थापन होस भनेर जेठ १५ गते संघ सरकारको बजेट ल्याउने दिन भनेर संविधानमै किटियो । २०७२ पछिको बजेट त्यसैगरी आएको छ । तर पनि पुँजीगत खर्च समयमै हुन नसक्ने समस्या विद्यमान छ । कार्यान्वयन गर्ने निकायका कर्मचारीमा दक्षताको कमी छ । स्थानीय तहमा त जनशक्ति नै छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार पोखरामा गरेको पूर्व बजेटकालीन अन्तरक्रियामा प्राडा लेखनाथ भट्टराईले भने, ‘प्रदेशमा त झन् कर्मचारीतन्त्र अस्थिर छ । ४ दिनको पाहुनाले खतरा लिएर किन काम गर्ने । सचिवहरु ३÷४ महिना टिक्नुहुन्न । अनि समयमा ठेक्का लाग्न सक्दैन, काम नै सुरु हुँदैन ।’
पृथ्वीनारायण क्याम्पस अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख भट्टराईले नेपालको बजेट प्रणाली सुधार्न नेपालको प्रशासनमा ‘विकास प्रशासन सेवा’ राख्न सुझाव दिए । उनले विकास प्रशासनकै क्षेत्रमा विशिष्टता हासिल गरेकालाई अवसर दिएमा खर्च प्रणालीले सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
४ दिनका पाहुनाले खतरा लिएर किन काम गर्दैनन्, प्रदेशका सचिवहरु ३४ महिना नटिक्ने, अनि कसरी हुन्छ काम ?
जुनसुकै क्षेत्रमा पनि प्राविधिक अभाव रहेको उनले सुनाए । प्राडा भट्टराईले भने, ‘केही समयअघि सुन्दरबजारको कृषि क्याम्पसमा गएको थिएँ, ७० जनाको दरबन्दी छ । तर १२ जना मात्र हुनुहुन्छ । पढाउने जनशक्ति नै छैन । प्राविधिक जनशक्ति पलायन हुने क्रम निकै छ ।’
उनले व्यवसाय क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र र विश्वविद्यालयबीच अनुसन्धानमा सहकार्य भएमात्र परिणाम आउने भनाइ राखे । नेपालको कर प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्ने सुझाव दिँदै उनले आयातमा कुन चिजलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो त्यही अनुसार कर लगाउन आग्रह गरे । उत्पादन क्षेत्रलाई करमा विशेष छुट दिनुपर्ने उनको धारणा थियो । कोभिडबाट ग्रसित पर्यटनलाई पुनर्जीवित हुने गरी बजेट ल्याउन उनले सुझाव दिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य वा महासंघ केन्द्रीय सदस्य बावुराम गिरीले सरकारले विगतमा ल्याएका नीति तथा कार्यक्रममा केही न केही समस्या रहँदै आएको भन्दै कमजोरी सुधार गर्दै जानुपर्ने भनाइ राखे । कृषिलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखे पनि त्यस अनुसारको उपलब्धि हुन नसकेको भन्दै उनले परम्परागत प्रणालीबाट माथि उठेर काम गर्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘परम्परागत तरिकाले गरेर हुँदैन । भूउपयोग नीति आउनै सकेको छैन । चक्लाबन्दी जस्ता प्रष्ट नीति अब आउनुपर्छ । उद्यमीले सहज रुपमा जग्गा पाउने गरी कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ ।’
फुटकर कामले उत्पादन लागत पनि बढ्ने भएकाले ठूला कृषि उद्यम आवश्यक पर्ने उनको भनाइ थियो । कृषि उद्यमका लागि सफ्ट लोनबाट बढाएर लैजानुपर्ने भन्दै उनले ठूला कृषि आयोजनाका लागि ५ करोडको सिलिङ थोरै भएकाले बढाएर २० करोड पु¥याउन सुझाव दिए ।
कृषिमा विदेशी लगानीको भने उनले खुलेरै विरोध गरे । ‘मल कारखानाका लागि ल्याउनुपर्छ । तर कृषि उद्योगकै लागि आवश्यक छैन । खाद्यान्न, डेरीमा विदेशी लगानी ल्याए, स्वरोजगार कृषि उद्यमीको अवस्था के होला ?’ उनले भने । कृषिमा अनुदान रकम दुरुपयोग भएकाले यसका लागि वैज्ञानिक प्रणाली अवलम्बन गर्न पनि उनले सुझाव दिए ।
उद्योग सञ्चालन प्रक्रिया नै निकै झन्झटिलो रहेको उनले गुनासो गरे । उनले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्रहरु निकै साँघुरा भइसके । अब ठूला ठूला क्षेत्र स्थापना गरिनुपर्छ ।’ उद्योग सञ्चालन सुरु नहुँदै र हुन थालेपछि विभिन्न खालका चुनौती भएको व्यवस्थित औद्योगिक क्षेत्र आवश्यक पर्छ । जसमा ऊर्जा र सुरक्षाको सुनिश्चिता होस् ।’ नेपालमा अझै पनि विकास प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको भन्दै गिरीले पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रष्ट मोडेल आउनुपर्ने, पारदर्शी तरिकाले योजना छनोट गरिनुपर्ने भनाइ राखे ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ उद्योगतर्फका उपाध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले विभिन्न झन्झट झेलेर अगाडि बढेका व्यवसायीहरु कोभिडले झनै मारमा परेको बताए । उनले समस्याहरुको लामो फेहरिस्त बनाएर लिखितरुपमै सुझाव पेस गरे ।
पोखरा पर्यटन परिषद् अध्यक्ष गोपिबहादुर भट्टराईले अहिले आन्तरिक पर्यटनबाट मात्रै व्यवसाय धानिएको बताए । युरोपका मुलुकहरुमा कोभिडको त्रास पनि कायमै रहेकाले २०२२ सम्म विदेशी पर्यटक नआउने उनले भनाइ राखे । उनले भने, ‘यसका लागि आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन नै अबको निकासको बाटो हो ।’ पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा ८० हजारले रोजगारी पाएकोमा अहिले त्यसको २० प्रतिशत मात्र काममा फर्किन सकेको बताए ।
बजारमा तरलता पर्याप्त भए पनि निक्षेपको तुलनामा कर्जाको ब्याजदर निर्धारणमा बैंकहरु व्यावहारिक हुन नसकेको उनको गुनासो थियो । तरलता व्यवस्थापनमा नेपाल राष्ट्र बैंक असफल भएको आरोप उनले लगाए । उनले मौद्रिक नीति कागजमै सिमित रहेको बताए । सानादेखि ठूलासम्मका व्यवसायी सबैले सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भनाए उनले राखे । पर्यटन व्यवसायीहरु बैंकको फोनबाट आजित भएको भन्दै उनले राष्ट्र बैंकभन्दा निजी बैंकहरु बढी शक्तिशाली भएजस्तो देखिएको बताए ।
नाट्टा पोखरा अध्यक्ष सञ्जयकान्त सिग्देलले बोर्डर बन्द भएका कारण पर्यटकीय गतिविधि बढ्न नसकेको बताए । आन्तरिक पर्यटक नै मुख्य आधार रहेकाले अब नेपालमा सातामा २ दिन सरकारी बिदा लागु गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । व्यवसायीहरु धेरै खालका करहरु तिर्नु परेको भन्दै यस्तो झन्झटबाट मुक्ति दिन आग्रह गरे । उनले कर्जाको ब्याजदर अझै नघटेको, निक्षेपमा दर घट्दा कर्जामा पनि स्वभाविक रुपमा घट्नु पर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै ओभरड्राप्टको दायरा बढाउन आग्रह गरे । कोभिडपछि व्यवसायी पलायन रोक्न पहल गर्न उनले सरकारी अधिकारीसँग आग्रह गरे ।
रोजगारदाता र कामदारबीचको सम्बन्ध सुधारका लागि पनि सरकारले चासो देखाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
टान पश्चिमाञ्चल उपाध्यक्ष धर्मराज पन्थी नेपालमा विदेशी पर्यटकले झेल्दै आएका समस्या सुल्झाउँदै जान सुझाव दिए । गण्डकी प्रदेशले जीवन रक्षा कोष सञ्चालन ल्याए पनि धितो चाहिने भएकाले अनौपचारिक क्षेत्र समेटिन नसकेको उनले बताए । पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योग भनिए पनि त्यस अनुसार व्यवहार हुन सकेन ।
रेबान पोखरा अध्यक्ष लक्ष्मण बरालले नयाँ शीर्षकमा ऋण लिनेहरुलाई बैंकले सहुलियत दिए पनि पुराना ऋणीलाई पेलेरै जाने नीति लिएको गुनासो गरे । उनले भने, ‘पुरानो लोनमा ब्याजदर घटाउन अझै पहल भएको छैन ।’ रेस्टुरेन्टहरुमा खाद्य पदार्थ र मदिराका लागि एउटै दरको मूल्य अभिवृद्धि कर व्यावहारिक नभएको उनको भनाइ थियो ।
लक्ष्मी गु्रपका प्रतिनिधि अनुपराज ढुंगानाले नेपाल राष्ट्र बैंकले लागु गरेको विनिमय दर भन्सार बिन्दुमा लागु हुन नसकेको बताए । उत्पादित सामग्री र कच्चा पदार्थका लागि एउटै प्रकारको भन्सार दर लागु गरिनु अव्यावहारिक रहेको उनको भनाइ थियो ।
कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक वासु रेग्मी कृषि व्यवसाय उद्योगसँग जोडिन नसकिनु नै विडम्बना रहेको बताए । उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने गरी नीति बनाउन उनले सुझाव दिए । नेपालमा पशु बिमा सहज भए पनि कृषि बिमा भने कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए ।
वन निर्देशनालय गण्डकीका निर्देशक केदार पौडेलले संघ सरकारले जम्मा ३० प्रतिशत बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाए पनि त्यही रकमसमेत खर्च गर्न अनेक खालका अवरोध आउने गरेको बताए । सामुदायिक वनको उत्पादनमा लगाइएको कर हटाइएकोप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तीय संस्था प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विमला योगीले साना तथा मmभौला महिला उद्यमी व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकबाट विशेष सहुलियत प्रदान गर्न जरुरी रहेको बताइन् ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका डेपुटी मेनेजर कृष्णप्रसाद पौडेलले निर्माणमा ७१ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएकोमा ५८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको बताए । समय अगावै सक्ने लक्ष्य रहे पनि कोभिडका कारण त्यसो हुन नसकेको बताए । तर पनि तोकिएकै समयभित्र संरचना तयार भइसक्ने भनाइ उनले राखे । विमानस्थल तयार भइसकेपछि पर्यटकलाई दिने सुविधा र अन्य संरचनाका लागि हामी तयार छौं कि छैनौं भनेर सोच्ने बेला आएको उनले बताए । उनले भने, ‘पर्यटनमैत्री यातायात, त्यही अनुसार होटेल रेस्टुरेन्टको प्रबन्ध, सुरक्षाको पनि अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । सडक सञ्जाल बिस्तार भएको छैन । ट्रेकिङ रुट व्यवस्थित गरिनुपर्छ ।’
पृथ्वीनारायण क्याम्पस अर्थशास्त्र विभागका चक्रपाणि पौडेलले विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानको केन्द्र बनाउनुपर्ने, प्रविधिमैत्री शिक्षा अबलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन गण्डकी संयोजक एवं एनआइसी एसिया बैंक प्रदेश कार्यालय प्रमुख दीपेन्द्र शर्मा व्यवसायीले भनेजस्तो सहजै ऋण थप्न सकिने अवस्था नरहेको भनाइ राखे । पोखरा महानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत भेषराज शर्माले बजेट प्रणालीमै सुधार गर्न सुझाव दिए ।
अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै
नेपाल राष्ट्र बैंक, आर्थिक अनुसन्धान विभागका निर्देशक डा. रामशरण खरेलले कोभिडका कारण विश्वसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र खुम्चिए पनि अब भने बिस्तारै चलायमान हुन थालेको बताए । पूर्व बजेटकालीन अन्तरक्रियामा उनले भने, ‘आयात बढ्दै जाँदा उपभोग पनि स्वभाविक रुपमा बढ्छ, विश्वभर कोभिडको महामारी यसले समग्र अर्थतन्त्रमा विस्तारै सकारात्मक संकेत देखाएको छ ।’ उनका अनुसार कोभिडका कारण यो वर्षको आर्थिक वृद्धि २ प्रतिशतले घटेको छ । मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा छ, निर्यात बढेको छ, आयात पहिलाभन्दा घटेको छ ।
विप्रेषणमा कोभिडको असर सोचे जस्तो खराब नरहेको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे । उनले भने, ‘गएको वर्ष ११ प्रतिशतले विप्रेषण बढेको छ । विदेश जानेको संख्या घटे पनि हुन्डीबाट पठाउने क्रम कम भएकाले सिधैँबाटोबाट रेमिट्यान्स आयो । सामाजिक सुरक्षाका कारण रेमिट्यान्समा कमी आएन ।’
कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, सहुलियतमा कर्जा, पुनर्कर्जा, विद्युतीय कारोबार र भुक्तानीमा राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन गर्दै आएको भन्दै उनले व्यवसायीहरु निरास हुनुपर्ने अवस्था नरहेको भनाइ राखे । उनले भने, ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा सुरु गरेको २ वर्ष भयो । २ वर्ष अगाडि १८ हजार थियो । अहिले ६० हजारले लिएका छन् । त्यसमा १ खर्ब प्रवाह भइसकेको छ । १० प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये धेरैजसो कृषिमा गएको उनले बताए । अहिले ३२ हजार किसानले यो कर्जा पाएको भन्दै उनले २ वर्ष अगाडि यो संख्या १७ हजारमात्रै रहेको बताए ।
पुनकर्जा कोषलाई ५ गुणा बढाएर २ खर्ब पु¥याइएकोमा त्यसमध्ये ८८ अर्ब लगानी भइसकेको उनले बताए । ‘धेरैले पाएनौं भनेर गुनासो गर्नुभएको छ, १४ लाख ऋणी सबैले यो पाउने होइन ।’ सुरुमा आह्वान गर्दा निवदेन नदिएकाहरु साथीभाइले पाएपछि बल्ल चासो दिन थालेको उनको भनाइ थियो ।
नेराबै पोखरा कार्यालयका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले गण्डकी प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीले भोगेका समस्या र ती समस्या समाधान लागि के गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव संकलन गरी सरकारलाई बुझाउन यो कार्यक्रम गरिएको बताए । उनले भने, ‘प्रदेशका लागि सुझाव समेत संकलन गरिन्छ, इनोभेटिभ आइडिया पनि संकलन गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सुझाव दिन सक्नुहुन्छ, यी सुझावहरु मौद्रिक नीतिमा समेत समावेश गर्न सकिन्छ ।’
पाेखरा । गण्डकी प्रदेश सभाकाे विशेष अधिवशेन वैशाख १३ गतेका लागि बाेलाइएकाे छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहितका दलले मागे…
पोखरा । सरकारले मधेस तथा थरुहट–थारुवान आन्दोलनका क्रममा संलग्न भएका राजपा नेता कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।…
COVID-19 : 1227 new cases, 255 recoveries, 8 deaths